Ogaden News Agency (ONA) – Golaha baarlamaanka Gobolka Canfarata oo ku dhawaaqay inuu casilay Cali Seero
Golaha baarlamaanka Gobolka Canfarata oo ku dhawaaqay inuu casilay Cali Seero
Warar lagu kalsoonyahay ayaa waxay sheegayaan inuu golaha baarlamaanka ee gobolka Canfartu ku dhawaaqeen in ay jagadii ka qaadeen Madaxwaynaha gobolka Canfarta Ismaciil Cali Sero.
Cali Sero ayaa waxay xubnaha baarlamaanka ku eedyeen inuu u adeego ururka EPRDF, oo la leeyahay wuxuu ka tirsanyahay gudidada fulinta ee ururkaas. Mudadii uu xilka hayay oo 19 sano ah ayaa lagu eedeeyay in uunan ummada Canfarta uu leeyahay waan mataalayaa uusan waxab u qabanin. Waxa kale oo lagu soo eedeyay maamul xumo aad ubaahsan iyo musuqmaasuqa heer aan laxakamayn karin gaadhay inuu ku jiro.
Go’aanka baarlamaanka Kadib ayuu Cali Sero isna ku dhawaaqay in uu jagadii ka qaaday madaxa siyaasada ee ururka Canfarta oo gacansaar la leh ururka EPRDF.
Waxaa kale oo uu warku intaas ku daray in qas badani ka taaganyahay, xasilooni darona ay ka jirto gobolkaas, waxaana laga yaabaa in loo magacaabo madaxwayne cusub si looga hor tago dhibaatooyinka ka jira gobolkaas.
Waxaynu la soconaa ka dib markii uu geeriyooday Meles Zenawi in awooda dawlada dhexe ee Ethiopia ay maalin waba maalinta ka danbaysa sii diciifyso isla markanaa ay soo baxayaan kooxo kala duduwan oo ku looltamaya awooda iyo hanti boob iyo qaataye qaado.
La soco waraka ka soo kordha arrimahan.
Habka warkan aad u qorteen waxay u egtahay sidii aad sharci u aragtaan Hab-maamulka Ethiopia ka jira. why dont we call Abdi ileey “M/wayne and his so-called Parliament ‘Parliament” Fadlan wax ka ka badala Web-ka ama Xidha waa lagu caajisaye.
waxaa dhami lahayd haddii aad odhan lahaydeen ” Woyanaha oo bilamay inuu kala badalo shaqaalihiisa Gobolada” — amar lagu siiyay Kooxda Gobloka Canfartu inay eryaan Gacan0yare Seero– ERDF yaa wax ka sheegi kara?? kkk
Ethiopia wax la yidhaa “parlement kama jiraan – cid wax xukunta oon tigrey ahayna kama jirto- Xisbi aan TPLF ahayna kama jiro, M/wayne aan kan tigrey-ga ahayna kama jiro!!!> you are telling us inaad sida Dagaal media ah kuwadi kartaan!! waa yaab!!
Waxa aan jeclaan Lahaa “Hab-dhaqanka Saaxadda” inaad dib ugu laabato. Yeysan kaaga dhagin Ina Iley oo kale maad dhahdaan.. Wakiilka Gumeysiga oo kale, Laakiin deegaanka Canfarta kolka ay Timaado, aniga oo aan English adeegsan, akhristayaasha ku xidhan webka qaab-dhismeedka Canfarta MAXAAY ka yaqanaan? Kama hadlayo qof la socda siyaasadda iyo qaabka qowmiyada Itoobiya yihiin. Jawaabta waa maya.
Qowmiyada Canfarta kala qeybsanaanteeda iyo dadka kale ee ku hoos dulman sida qowmiyada ORGOBADA oo kale oo dhab ahaan u jirta markii la rabana qarxi karta, Uma baahna barabogaando iyo iwm.
Doorashada cinwaanka warka, xulashadiisa waxaa Iska leh, tafatiraha qeybta wararka ee maahan akhristayaasha mid u taalla. Kawaran hadaan anigu la dhacay cinwaanka warka.
Ogadennet.com waad ku mahadsantihiin wararka dhabta ah eed noo soo gudbisaan.